ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ တရားဝင် လမ်းခွဲပြတ်စဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ
[Zawgyi] ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ တရားဝင် လမ်းခွဲပြတ်စဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ ပရိသတ်ကြီးရေ ချစ်စရာသားလေး သိဒ္ဓိစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မယ်လိုဒီကတော့ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ အားလုံးကထင်ခဲ့ကြပေမယ့် သူမရဲ့တကယ့်ဘဝအမှန်ကို ပရိသတ်တွေကို ဖွင့်ချပြလိုက်ပါပြီ ။ ဘဝရဲ့အပြောင်းအလဲအတွက် အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစား ပြီးမှသေချာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာလို့လည်း မယ်လိုဒီက ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ် ။ သူမဘဝကို အားကျတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း အိမ်မှာကျွန်မနေရာမှာ တပတ်လောက်နေကြည့်ပါလို့ ရေးသားထားပါသေးတယ် ။ခုချိန်မှာ သားရဲ့အနာဂတ်အတွက် ပညာအမွေ ဥစ္စာအမွေ ပေးနိုင်တဲ့ အမေ ဖြစ်ဖို့ဘဲ ကြိုးစားပါတယ်ဘဝလမ်းမှာ တစ်ယောက်တည်းပြေးရတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်နှစ်ယောက်ဆို ကျွန်မ ကျောမပိုးနိုင်ဘူးလေသိက္ခာအရ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားရ ကျောပိုးနိုင်လဲ ၅နှစ်ပေါ့တသက်လုံး ပင်ပင်ပမ်းပမ်းရှာထားသမျှ ၅နှစ်ကျော်အတွင်း သဲထဲရေသွန်သလို …
အဖွားအသက်က (၉၂)နှစ် လမ်းတကာ ပက်ပြီး ဖိနပ်လှည်းရောင်းစားနေပါတယ်တဲ့(ရုပ်/သံ)
[Zawgyi] အဖွားအသက်က (၉၂)နှစ် လမ်းတကာ ပက်ပြီး ဖိနပ်လှည်းရောင်းစားနေပါတယ်တဲ့(ရုပ်/သံ) လမ်းမပေါ်ဖိနပ်လည်ရောင်းနေတဲ့အသက်၉ဝအမေကြီး သမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေပြီးစားဖို့ရာတော့မပူရဘူး ဖိနပ်ရောင်းရတာကိုတော့ လှုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေကြီးကိုငါးသောင်းကျပ်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အမေကြီးသွားလိုရာကိုကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုသန့်ဇင်ထွန်း+မခင်သက်ထားမိသားစုမှလှုဒါန်းပါသည် သာဓုသာဓုသာဓု ပါ ကုသိုလ်ရှင်အပေါင်းတို့၏ ကုသိုလ်အစုစုတို့သည် ဆင်းရဲကင်းရာ နိဗ္ဗာန်အထောက်အပံ့ဖြစ်ရပါလို၏ အမေကြီးကိုလှူတော့ အံ့သြပုံစံလေးနဲ့ သီလကြောင့်အသက်ရှည်ဒါနနဲတော့ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲ လူဘဝအဖုံဖုံ သံသရာခရီးသွား ဧည့်သည်များ အပြန်အတွက် ဘာအထုပ်ထုပ်ကြမလဲ စဉ်းစားကွယ် ONE TO ONE ကလေးလူနာကူညီရေး ကိုဝမ်း (စိုင်းနေမျိုးမောင်မောင်) 09765765179 ၊ မန္တလေးမြို့ [Unicode] အဖှားအသကျက (၉၂)နှဈ လမျးတကာ ပကျပွီး ဖိနပျလှညျးရောငျးစားနပေါတယျတဲ့(ရုပျ/သံ) လမျးမပျေါဖိနပျလညျရောငျးနတေဲ့အသကျ၉ဝအမကွေီး သမီးတဈယောကျနဲ့အတူနပွေီးစားဖို့ရာတော့မပူရဘူး ဖိနပျရောငျးရတာကိုတော့ လှုပါတယျလို့ပွောပါတယျ။ဒါကွောငျ့အမကွေီးကိုငါးသောငျးကပျြကူညီခဲ့ပါတယျ။ အမကွေီးသှားလိုရာကိုကားနဲ့လိုကျပို့ပေးခဲ့ပါတယျ။ ကိုသနျ့ဇငျထှနျး+မခငျသကျထားမိသားစုမှလှုဒါနျးပါသညျ သာဓုသာဓုသာဓု …
ပုဂံ ညောင်ဦးမှာ ရှားရှားပါးပါးတွေ့ရပြီး ထူးခြားလွန်းတဲ့ ၉ မွှာ ထန်းပင်
[Zawgyi] ပုဂံ ညောင်ဦးမှာ ရှားရှားပါးပါးတွေ့ရပြီး ထူးခြားလွန်းတဲ့ ၉ မွှာ ထန်းပင် ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာလောကမှာ ဆန်းကြယ်မှုတွေက များစွာရှိပါတယ်။ ဒါတွေဟာအကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် ဒေသန္တရ ဗဟုသုတဖြစ်အောင် ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ ထန်းပင်တွေဟာ ကိုင်းဆက် မျိုးပွားထားခြင်းမရှိပဲနဲ့ တစ်ပင်တည်းကနေ ကိုးပင် တိတိ ပွားများ ရှင်သန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ထန်းပင်ရဲ့ သဘောသဘာဝက တစ်ပင်တည်းသာ ထီးထီးရပ်တည်လေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်အရပ်ဒေသမှာ ဖြစ်ဖြစ် ထန်းပင် နှစ်ပင်က လိမ်ပြီးပူးနေတာကိုသာ တွေ့ကောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုလို ထန်းပင်တစ်ပင်တည်းကနေ ကိုးပင် တိတိပွားနေတာကိုတော့ တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီထန်းကိုးပင်ကတော့ မန္တလေးတိုင်း ၊ပုဂံ ညောင်ဦးမြို့နယ် ၊ သဲပြင်တောရွာမှာ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တကယ်လို့ ပုဂံဘက် ဘုရားဖူးရောက်ခဲ့ရင်လည်း …
ရှိသမျှ မိန်းကလေးအားလုံး ဆံပင်အရှည်ထားပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ရွာ
[Zawgyi] ရှိသမျှ မိန်းကလေးအားလုံး ဆံပင်အရှည်ထားပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ရွာ ခေတ်ကာလတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါ ပြောင်းလဲကုန်ကြပါတယ်….မိတ်ကပ်ကြောင့် မိန်းကလေးတွေကလည်း ပိုပိုလှလာသလို..တဖက်မှာလည်း သနပ်ခါးဆိုတာပျောက်ကွယ်ကုန်ပါတယ်….တချို့မိန်းကလေးတွေက ဆံပင်တွေဆေးဆိုး အတိုညှပ်ပြီး ကိုရီးယားမလေးတွေလို ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ခုပြောပြမယ့် ရွာက မိန်းကလေးတွေက တစ်ရွာလုံးနီးပါး မြန်မာဆန်ဆန် ဆံပင်ရှည်လေးတွေနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြတာပါ…. မန္တလေးတိုင်း ရမည်းသင်းမြို့နယ် ပျားစည်ရွာက မြန်မာမိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ဆံပင်အရှည်ကြီးတွေ ထားကြတာပါ….မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ တကယ့်ကို ကျက်သရေရှိလှပနေကြပါတယ်…ဆံပင်အတိုလေးတွေ အဝတ်အစားအတိုအပြတ်တွေနဲ့ ခေတ်ဆန်နေကြတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ခုလို မြန်မာ့ရိုးရာကို ထိန်းသိမ်းတာဟာ ဂုဏ်ယူလေးစားဖွယ်ဖြစ်ရပ်လေးပါပဲ… ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း မိမိတို့မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အဆိုပါရွာလေးကို ဂုဏ်ပြုစကားလေးတွေပြောကြားရင်း ဂုဏ်ယူနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. Source …
လူတစ်ယောက် သေပြီးရင် ဘာတွေ လှူလို့ရလဲဆိုတာ အပြည့်အစုံ သိထားရန်
[Zawgyi] လူတစ်ယောက် သေပြီးရင် ဘာတွေ လှူလို့ရလဲဆိုတာ အပြည့်အစုံ သိထားရန် လူတစ်ယောက် သေပြီးပြီးချင်း သင်ကိုယ်တိုင် လှူနိုင်သော အလှူတစ်ခု (လူတစ်ယောက်သေပြီးပြီးချင်း ) (1) နှလုံးက 10မိနစ်အထိ ရှင်ပါတယ်။ (2) ဦးနှောက်က မိနစ်20အထိ ရှင်တယ်။ (3) မျက်လုံးက 4နာရီအထိ ရှင်ပါတယ်။ (4) အရေပြားက ငါးရက်အထိ ရှင်ပါတယ်။ (5) အရိုးက ရက်30အထိ ရှင်တယ်လို့ သိရတယ်။ သေလွန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ လူတစ်ယောက်က သုံးရက်အကြာမှာ လက်သည်းခွံတွေ ကြွေတယ်။လေးရက်အကြာမှာ ဆံပင်တွေ ကျွတ်တယ်။ ငါးရက်အကြာမှာဦးနှောက်က အရည်ပျော်တယ်။ ခြောက်ရက်အကြာမှာ အစာအိမ်က အရည်ဖြစ်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ ဒွါရပေါက်ကနေ ယိုစီးတယ်။ …
တရားပွဲတွေလုပ်ချင်ရင် ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဆက်သွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ
[Zawgyi] တရားပွဲတွေလုပ်ချင်ရင် ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဆက်သွယ်လို့ရနိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ ၁။ သီတဂူဆရာတော်ကြီး ၀၉၅၁၉၉၉၉၁ ၂။ ဗန်းမော်ဆရာတော် ၀၉၄၃၀၅၉၄၄၅ ၃။ ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ၀၁၆၅၀၇၀၅ ၄။ မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဒေါက်တာကောဝိဒ ၀၁၅၄၇၁၃၁ ၀၉၅၀၂၂၉၈၆ ၅။ သီတဂူကြယ်တစ်ပွင့် ၀၉၂၀၁၁၁၅၃ ၀၉၆၈၁၂၈၉၆ ၆။ ဦးအဂ္ဂ ၀၉၅၀၅၅၈၃၈ ၇။ ဓမ္မစေတီ ဦးကောသလ ၀၁၅၈၄၃၁၇ ၈။ မေတ္တာအေးဆရာတော် ၀၉၅၁၄၂၄၀၄ ၉။ ဇလွန် ဦးကောသလ္လ ၀၉၅၀၅၉၆၂၆ ၁၀။ သီတဂူအရှင်ဒေဝိန္ဒာဘိဝံသ ၀၉၈၆၁၆၂၂၆ / ၀၉၇၈၇၇၈၇၅၆၇ ၁၁။ အရှင်သောမ ၀၉၈၇၄၀၇၃၃ ၁၂။ ရေကြည်ဆရာတော် ပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြုဓမ္မကထိ အရှင်သီလာနန္ဒ ဓမ္မာစရိယ …
အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေး ပါးလိုက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမိခင်ကြီးအမေစု..
[Zawgyi] အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေး ပါးလိုက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမိခင်ကြီးအမေစု.. Covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေခံလူတန်းစားတွေကို ဆန်၊ဆီ၊ဆား၊ကြက်သွန် ဝေခဲ့တာ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုဆီအတွက် ပျမ်းမျှအသုံးပြုငွေ(၁၈,၀၀၀)ခန့်ရှိတယ်တဲ့။အိမ်ထောင်စု(၄)သန်းခန့်ကို အစိုးရက ကျပ်ဘီလီလျံ(၅၀)အသုံးပြုပြီးထောက်ပံ့ခဲ့ရာမှာ အောက်ခြေကမညီမျှခြင်းအသံလေးတွေကြားရလို့ အခု ဒုတိယအကြိမ် အစိုးရရဲ့စေတနာအနေနဲ့ ယခင်ဝေမျှတဲ့ ပမာဏရဲ့နှစ်ဆ၁၈,၀၀၀(ခန့်မှန်း)x ၂=၃ ၆,၀၀၀ကျပ်(ခန့်မှန်း)ကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့အိမ်ထောင်စုတွေဆီ အလေအလွင့်မရှိစေရဘဲ Wave Money လို တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်နဲ့ ပေးဝေထောက်ပံ့ဖို့ Digital Information တွေစုနေပါပြီတဲ့ဗျာ။ဦးဇော်ဌေး(သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)ရဲ့ Presses Briefing မှ ကောက်နှုတ်ချက်ပါ။ Chithmwe Kalay ချစ်မွှေး(ကလေး) ၁၆-၀၅-၂၀၂၀ Credit : Chit Hmwe [Unicode] အခွခေံလူတနျးစားတှအေတှကျ သတငျးကောငျးလေး ပါးလိုကျတဲ့ ပွညျထောငျစုမိခငျကွီးအမစေု.. Covid-19 နဲ့ပတျသကျပွီး …
နောင်ချိုမြို့ မှာ တိုက်ခတ်သွားတဲ့ လေဆင်နှာမောင်း (ရုပ်သံဖိုင်)
[Zawgyi] နောင်ချိုမြို့ မှာ တိုက်ခတ်သွားတဲ့ လေဆင်နှာမောင်း (ရုပ်သံဖိုင်) နောင် ချိုမြို့ မှာ တိုက်ခတ် သွားတဲ့ လေဆင်နှာမောင်း (ရုပ်သံဖိုင်) ကြောက်စရာ ကြီးပါလား။7.6.2020 နေ့ ညနေ3နာရီခွဲခန့်အချိန်တွင် နောင်ချိုမြို့အတွင်း လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လေဆင်နှာမောင်းနဲ့အတူ မိုးပါပြင်းထန်စွာ ရွာချခဲ့ပါတယ်။လူနေအဆောက်အအုံများ ပျက်စီးခဲ့ပီး လူသေဆုံး မှုတော့ မရှိဘူး လို့လည်း ကနဦးသတင်းအရသိရပါတယ်။ ယခုလိုမိုးဦးရာသီမှာ မိုးသီးများကြွေကျခြင်း ကုန်းတွင်းအပူပိုင်းလေပွေများ လေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ပေါ်ပီး မိုးကြိုးပစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ မိုးကြိုးပစ်လို့ လူတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေကြသလို ကျွဲနွားတေလည်း မိုးကြိုး ထိမှန်ပီးသေဆုံးကုန်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုဟာ သစ်တော ပြုန်တီးခြင်း ကမ္ဘာကြီးပိုမိုပူပြင်းလာခြင်းနဲ့အတူ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် …
ပေါ့ဘာအပါအ၀င် ခြေစွမ်းတိုးတက်ဖို့လိုနေတဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမား(၉)ဦး
[Zawgyi] ပေါ့ဘာအပါအ၀င် ခြေစွမ်းတိုးတက်ဖို့လိုနေတဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမား(၉)ဦး လာမယ့်ဇွန်လ(၁၇)ရက်နေ့ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပွဲစဉ်ကတော့ (၁၉)ရက်နေ့မှ စပါးအသင်းနဲ့ စဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု အခြေအနေတွေက တော်တော်လေးကောင်းမွန်နေပြီး၊ အသင်းသားအားလုံးနီးပါး စုံစုံလင်လင်ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုစုံစုံလင်လင်ရှိနေပေမဲ့ ဒီရာသီမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲ ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်ဖို့လိုနေတဲ့ ကစားသမားတွေကလည်းအများအပြားရှိနေတာပါ။ဒီကစားသမားတွေထဲမှာပေါ့ဘာလည်းပါဝင်နေပြီးတော့နောက်ထပ်တိုးတက်ဖို့လိုနေတဲ့ ကစားသမား(၈)ဦးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)လင်ဂတ်။ ။လင်ဂတ်ကတော့ ဒီစာရင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာကိုရှိနေသင့်တဲ့ ကစားသမားပါပဲ။ (၂၀၁၉)ခုနှစ်တစ်ခုလုံးခြေစွမ်းမပြနိုင်သလို အသင်းဖော်တွေအတွက်ရော ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးမှရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ လက်ဂတ်တစ်ယောက် ရာသီပြန်စရင်တော့ သေချာပေါက်ခြေစွမ်းတိုးတက်ဖို့လိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။(၂)ပေါ့ဘာ။ ။ဒီရာသီဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေရသလို ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပေါ့ဘာတစ်ယောက်ရာသီပြန်စရင်ခြေစွမ်းတွေပြန်တိုးတက်ဖို့တော့လိုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ (၃)တူအမ်ဇီဘီ။ ။ဒီရာသီမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီး၊ ရာသီပြန်စရင်တော့ ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒီရာသီမှာယူနိုက်တက်အတွက်(၁၀)ပွဲသာကစားထားရသေးပြီးတော့ အသင်းကြီးမှာပိုမိုနေရာရဖို့အတွက်ဆိုရင်ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်ဖို့လိုနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။(၄)ပါရဲရား။ ။ပါရဲရားကလည်း လင်ဂတ်လိုပါပဲ။ ပွဲထွက်ခွင့်တော်တော်များများကို ရထားခဲ့ပေမဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းတိုးတက်ဖို့ကတော့ …
ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေထဲမှာတန်ဖိုး အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်
[Zawgyi] ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေထဲမှာတန်ဖိုး အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့ ဖာနန်ဒက်စ် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီအပြောင်အရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ ယူနိုက်တက်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေထဲမှာတန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီဈေးကွက်ထဲမှာ ယူနိုက်တက်ကို စုစုပေါင်းပြောင်းရွှေ့ကြေးယူရို(၆၈)သန်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊အချိန်တိုတိုနဲ့ ယူနိုက်တက်မှာခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ CIES Football Observatoryအဖွဲ့ရဲ့ ရဲ့နောက်ဆုံးလေ့လာချက်တွေအရ ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးပမာဏဟာ ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ လက်ရှိပြောင်းရွှေ့ကြေးဟာ ယူရို(၁၀၄.၉)သန်းအထိရှိနေပြီး၊ ပေါင်နဲ့တွက်ရင်ပေါင်(၉၃.၆)သန်းအထိတန်ကြေးရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တတက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ အချိန်ခဏအတွင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့်အခုလို မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်နောက်မှာ ဒုတိယတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး ကွင်းလယ်ကစားသမားကတော့၊ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား မေဆွန်မောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ယူရို(၁၀၂.၅)သန်းအထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တတိယတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး ကွင်းလယ်ကစားသမားကတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဒီဂျောင်ဖြစ်ပြီး ယူရို(၁၀၂.၁)သန်းအထိရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Credit;Nalka [Unicode] ကှငျးလယျကစားသမားတှထေဲမှာတနျဖိုး အမွငျ့ဆုံးဖွဈလာတဲ့ ဖာနနျဒကျဈ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီအပွောငျအရှဈေ့ေးကှကျထဲမှာ …
Total views : 2453605